အခြားတိုင်းပြည်ကနေ key ကိုအတူ Kaspersky ဖွင့်ပေးခြင်း (ဒေသ) – တေလာ Lopes ツဘလော့
အခြားတိုင်းပြည်ကနေ key ကိုအတူ Kaspersky ဖွင့်ပေးခြင်း (ဒေသ)
ဤသည်မှာပြဿနာကိုကျော်လွှားဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည် “activation code ကိုဒီဒေသအဘို့မမှန်ကန်”, အခြို့သောသော့သာအချို့သောဒေသများထံမှသုံးနိုငျတဲ့ကန့်သတ်လည်းမရှိကတည်းက (နိုင်ငံပေါင်း).
အဘယ်သူသည် Windows ကိုမှအဆင့်မြှင့် 10, အချို့သောပရိုဂရမ်များအလုပ်လုပ်ရပ်တန့်ကြောင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်, သူတို့တွင် Kaspersky 2015. Kaspersky Lab မှအဆိုပြုထားသောအဖြေမှာမူကွဲအသစ်ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်ဖြစ်သည် 2016, ပြီးသား Windows နှင့်သဟဇာတ 10. သင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်, သငျသညျသစ်ကို Kaspersky ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ် 2016 URL မှတဆင့်: http://www.kaspersky.com/downloads/internet-security.
အိုကေ, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒီပို့စ်၏ရည်ရွယ်ချက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခြားပြproblemနာတစ်ခုမှလာ၏. ငါ့မှာ Kaspersky သော့ရှိတယ် 2016 ဘာလဲ, ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုသုံးရန်ကြိုးစားသောအခါ, ငါအောက်ပါမက်ဆေ့ခ်ျကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်:
ထင်ရှားစွာ, အချို့သောသော့များကိုအချို့သောဒေသများမှသာအသုံးပြုနိုင်သည် (နိုင်ငံပေါင်း). ငါ၏အမှုကိစ္စများတွင်, ငါယူအက်စ်တွင်ခေတ္တရှိခဲ့ပြီးသော့သည်ဘရာဇီးမှဖြစ်သည် (သို့မဟုတ်အခြားဒေသ, ဒီတစ်ခါလည်း).
အစွန်အဖျားရိုးရှင်းပါသည်: Kaspersky ကို Brazil proxy ဖြင့် configure လုပ်ပါ (သင်၏သော့ဝယ်ယူထားသည့်အခြားဒေသများသို့မဟုတ်). ဒါကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်3ခြေလှမ်းများ:
(1) Antivirus ကိုဖွင့်ပြီး access လုပ်ပါ “ချိန်ညှိချက်များ> အပို> ကွန်ယက်> Proxy server ဆက်တင်များ“.
(2) အဆိုပါ Check “သတ်မှတ်ထားသော proxy server ဆက်တင်ကိုသုံးပါ” နှင့်ဝင်ပါ အိုင်ပီ / ဆိပ်ကမ်း သင်၏သော့၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဒေသအတွက် proxy ၏ (ငါ၏အမှု၌, ဘရာဇီး။).
ဤ proxy IP / Port နံပါတ်ကိုဒီဆိုဒ်များမှရယူနိုင်သည် (နိုင်ငံအလိုက် filter ကိုသုံးပါ):
ပွောဆို: အိုင်ပီ / ဆိပ်ကမ်းအလုပ်မလုပ်လျှင်, နောက်တစ်ခုကြိုးစားကြည့်ပါ ဦး.
(3) သင်၏မှန်ကန်သောသော့ကိုထည့်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးကိုသက်ဝင်စေပါ. ထို! activated ပြီးနောက်, proxy ကိုဖျက်ပြီး database ကိုပုံမှန် update လုပ်ပါ.
[Fix] Kaspersky Internet Security - ဤဒေသအတွက် Activation ကုဒ်သည်မမှန်ကန်ပါ 2012
စုစုပေါင်း access: 27055
21 သြဂုတ်လ 2015 တေလာ Lopes	activation, သော့, ကုဒ်မမှန်ကန်ပါ, pers, သော့, တိုင်းဒေသကြီး
5 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း “အခြားတိုင်းပြည်ကနေ key ကိုအတူ Kaspersky ဖွင့်ပေးခြင်း (ဒေသ)”
Paulo Maciel ကပြောပါတယ်:
ပျဉ်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, တကယ်အလုပ်လုပ်တယ်!!! ပှေ့ဖကျ
29 ဇန္နဝါရီလ 2016 သို့ 15:03
သင်တစ်ဦးပါရမီနေ! အကျင့်ကိုကျင့်. Superenojada တကယ်ငါကိုသက်ဝင်မဟုတ်နိုင်ခဲ့သည်. သင် program ကိုဖယ်ရှားအခြား reinstall လုပ်ဖို့အတင်းအကျပ်နေကြသည်ကံကြမ္မာကိုတစ်တိုင်းပြည်လှည့်ကွက်အတွက်လိုင်စင်ကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်ငါကတကယ်မိုက်မဲတွေ့ပါ, နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ဖွင့်လို့မရပါ. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်.
23 ဇွန်လ 2017 သို့ 8:44
ပျဉ်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အကြှနျုပျ၏ key ကိုဤနေရာတွင်စပိန်အတွက်ဘရာဇီး၌တည်ရှိ၏ငါနှင့်အတူဿုံအလုပ်လုပ်ခဲ့.
23 ဇူလိုင်လ 2017 သို့ 14:36
သခင်ဘုရားသည် Mesa ကပြောပါတယ်:
သင်တစ်ဦး bug ကိုနေ, : P… မာစတာ!!!! ငါသည်အခြားကုဒ်မဝယ်မယ်လို့, ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံး percerverancia!!! funcionaaaaa!!!! ဒီ vivooo!!! ကြေးဇူးတငျစကား!!!!
4 စက်တင်ဘာလ 2017 သို့ 17:43
Mac Air ပေါ်မှာကျွန်တော်ရှာလို့မရဘူး. ဆော့ဗ်ဝဲချိန်ညှိချက်များကိုကျွန်တော်ရှာမတွေ့ပါ
6 ဇန္နဝါရီလ 2021 သို့ 12:45
မူပိုင်ခွင့် © 2021 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.043.874 ဝင်ရောက်ခွင့်